Kugadzira Mould, Jekiseni Kuumbwa, Zvikamu zvePurasitiki Kuumbwa - Mestech
Kugadzira chakuvhuvhu uye jekiseni kuumbwa
MESTECH ine yakakwana purasitiki muforoma yekugadzira system.
Yakanaka simbi alloy uye yakakwira chaiyo zvikamu inogona kuwanikwa.
Chigadzirwa chitsva kubva pakutanga dhizaini kugadzirwa uye kushambadzira.
Kune zviuru zvezvigadzirwa pamusika, izvo zvinogara zvichishandurwa mazuva ese.
Zvikamu zvepurasitiki zvinogadzirwa kuburikidza nekuumbwa kwekuumbwa nedzimwe nzira dzekugadzirisa, idzo saizi uye basa zvinosangana nezvinodiwa nevagadziri. Kupfuura 80% yezvikamu zvepurasitiki zvakaumbwa nejekiseni jekiseni, inova ndiyo nzira huru yekuwana chaiyo epurasitiki zvikamu. Jekiseni epurasitiki zvikamu uye zvigadzirwa zvakapinda mune ese matunhu ehunhu hwekuita ...
Kuti tiite zvakanaka mukugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki, isu tinofanirwa kunzwisisa mhando uye mashandisiro epurasitiki. Plastiki rudzi rweakakwira mamorekuru macomputer (macrolecule) ayo akaumbiridzwa nekuwedzera polymerization kana polycondensation reaction ne monomer kunge mbishi zvinhu. Kune akawanda marudzi emapurasitiki ane akasiyana zvivakwa, asi zviri nyore kuve akareruka uremu, ...
Plastic Medical bhokisi (inonziwo mushonga bhokisi) kana mabhokisi epurasitiki ekurapa, anoshandiswa zvakanyanya muzvipatara nemhuri. Iyo inogona kushandiswa kuchengetedza zvinodhaka, zvekushandisa zvekurapa kana kuitakura yekuona varwere. Bhokisi rekurapa, sekureva kwaro zita, mudziyo wekuchengetera mishonga nemidziyo yekurapa, iyo inogona kutorwa ikashandiswa kana paine mamiriro ...
With kukura ano indasitiri, kune zvakawanda uye kwazvo epurasitiki zvinhu. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoshandiswawo zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana. Kunyanya, anowedzera uye chaiwo epurasitiki zvikamu zvinoshandiswa. Iye zvino ngatigoveranei nemi iwo matipi ezve chaiwo epurasitiki zvikamu dhizaini uye kuumbwa. Kupatsanura kwezvakanaka epurasitiki zvikamu.